နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller ကို - Rayson
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller ကို.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Rayson.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Rayson.
Rayson ထုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်သုတေသန၊ ရှေ့ပြေးပုံစံဒီဇိုင်း၊ ပိတ်ထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း၊.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller ကို.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။